Daawaynta – somali
Qaaxad waa laga bogsan karaa, wadajir aan u fulino!
Waa maxay qaaxadu
Sida ay u gudubto
Sadhowga (qaadista) qaaxada iyo cudurka qaaxada
Qaaxda iyo HIVga
Dhibaatada daawada qaaxada
Tilmaamaha bukaanka inta lagu jiro takoorka guriga
Anigu halis ma u ahay qaaxada
Kooxaha loo filaayo in ay qaaxo qabaan
Raad-raaca xariirka -maxaa loola jeeda?
Dadka magangalyo doonka ah
Macluu aad qoraal ah
Qaaxada waxa lagu daaweeyaa daawada antibiootiga.
Qaaxada waxa lagu daaweey tiiyoo laqaadanayaa dhawr daawo oo kala duwan isla mar. Daawayntu waxa ay socotaa ilaa lix bilood. Daawadu waxa ay socon kartaa mudo dheer hadii xanuunu aad u culus yahay. Daawadu marka ay bilaabanto ka dib dhibaatatad gudbinta cudurku dhakhso ayuu hoos ugu dhacdaa.
Si aad uga bogsatid curka, waxa muhiima in aad talada si fiican u raacdo. Daawada waa in loo qaataa joogto. Dadaka xanuunka qaaxada qabaa hadii ay joojiyaan daawada waxa ku soolaabanaaya xanuunka. Hadii daawada ay u qaadan waayaan si saxa, bakteriada waxa yeelanaysaa adgaysi aanay daawadu dilikarin. Markaas oo ay adkaato in cudurka la daaweeyo.
Hadii bukaanku qaado qaaxada nooca adkaysiga u leh daawada, isagu/iyado waxa lagu daaweeyaa ilaa shan ama lix daawo oo wada socda. Daawayntu wax ay qaadataa inta badan ilaa laba sano.
Hadi buakaanku uu fidinaayo qaaxada, isaga iyada waxa lagu daweeyaa qol gaara oo loo gu talagalya in in cudurka hawada raaca lagu takooro. Takooridu waxa ay ka hortegaysaa faafida qaaxad u gudbaysa bukaanada kale iyo shaqaalaha isbitaalka ku sugan. Sidaas awgeed bukaanku waxa uu ku jiraan qol uu keli ku jahay isla markaasana waxa la xayaara dhaqdhaqaaqa bukaanka ee waadhka dhexdiisa.
Macluumaadka dheeraada ka akhri takoorida.
Ku saabsan goobta webka
© 2021 somali • Powered by GeneratePress